News18 Nepal || विश्वभर कोरोना कहर : कस्तो छ सार्क राष्ट्रको अवस्था ? - News18 Nepal
विश्वभर कोरोना कहर : कस्तो छ सार्क राष्ट्रको अवस्था ?
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या एक करोड नाघेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वभर १ करोड २ लाख ४९ हजार ३ सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक २६ लाख ३७ हजार ७७ छ ।
त्यस्तै, ब्राजिलमा १३ लाख ४५ हजार २ सय ५४, रुसमा ६ लाख ३४ हजार ४ सय ३७ र भारतमा ५ लाख ४९ हजार १ सय ९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । विश्वभर ज्यान जाने कोरोना संक्रमितको संख्या ५ लाख नाघेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ५ लाख ४ हजार ४ सय ६६ जनाको ज्यान गएको छ ।
अमेरिकामा १ लाख २८ हजार ४ सय ३७, ब्राजिलमा ५७ हजार ६ सय ५८, बेलायतमा ४३ हजार ५ सय ५०, इटालीमा ३४ हजार ७ सय ३८ जनाको ज्यान गएको छ । विश्वभर ५५ लाख ५६ हजार ६ सय ३४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक छ ।
अमेरिकामा १० लाख ९३ हजार ६ सय ३४, ब्राजिलमा ७ लाख ३३ हजार ८ सय ४८, रुसमा ३ लाख ९९ हजार ८७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा पनि १२ हजार ७ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ३ हजार १३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २९ जनाको ज्यान गएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ लाख ४९ हजार १ सय ९७ पुगेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमणपछि ज्यान जानेको संख्या १६ हजार ४ सय ८७ पुगेको छ । भारतमा हालसम्म ३ लाख २१ हजार ७ सय ७४ संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
पाकिस्तानमा हालसम्म २ लाख ६ हजार ५ सय १२ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये पाकिस्तानमा ४ हजार १ सय ६७ जनाको ज्यान गएको छ । पाकिस्तानमा हालसम्म ९५ हजार ४ सय ७ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
श्रीलंकामा संक्रमितको संख्या २ हजार ३७ पुगेको छ । संक्रमणपछि ज्यान जानेको संख्या ११ छ भने निको हुनेको संख्या १ हजार ६ सय ६१ छ । बंगलादेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ३७ हजार ७ सय ८७ पुगेको छ ।
बंगलादेशमा हालसम्म १ हजार ७ सय ३८ जनाको ज्यान गएको छ । उपचारपछि निको हुनेको संख्या बंगलादेशमा ५५ हजार ७ सय २७ पुगेको छ । अफगानिस्तानमा संक्रमितको संख्या ३० हजार ९ सय ६७ पुगेको छ । अफगानिस्तानमा ७ सय २१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने १२ हजार ६ सय ४ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
भुटानमा संक्रमितको संख्या ७६ पुगेको छ । उपचारपछि निको हुनेको संख्या ३८ छ । माल्दिभ्समा संक्रमितको संख्या २ हजार ३ सय २४ छ । ज्यान जानेको संख्या ८ छ भने उपचारपछि निको हुनेको संख्या १ हजार ९ सय ११ पुगेको छ ।
असार २६ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
विश्वभर कोरोना संक्रमित आजसम्मकै उच्च, कति पुग्यो मृतकको संख्या ?
असार २५ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
आयो खुसीको खबर : वैज्ञानिकले बनाए कोरोना भाइरस नष्ट गर्ने फिल्टर
नेपालमा आज २५५ जनामा कोरोना पुष्टि, कहाँ कति थपिए ?
कोरोना भाइरस बारे दुखद खबर, डब्ल्युएचओले दियो चेतावनी
आजदेखि चार दिनसम्म ठूलो पानी पर्ने, यी क्षेत्रमा हुनेछ खतरा
नेपालमा आज थपिएका कोरोना संक्रमित को को हुन् ?
नेपालमा थप १०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा बाढी पहिरोको कहर : पछिल्लो २४ घण्टामा कहाँ कति क्षति ?